lulu: နီဝါနှစ်လွှာ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်း
at 1:50 PM Labels: အချိုပွဲ
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ မောင်နှမများအားလုံးကို ဒီနေ့မှာတော့ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းလုပ်နည်း လေး မျှဝေပါရစေဦးရှင်။ မောင်နှမအချို့ ကျွန်မကို တောင်းဆိုထားတာလည်း ကြာပြီမို့ ဒီနေ့အလှည့်ကျအနေနဲ့ မျှဝေခွင့်ပြုပါနော်။
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ရခိုင်ငှက်ပျောသီး တစ်ဖီး (ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မောင်နှမတွေ အဖို့ ရခိုင်ငှက်ပျောသီးအစား သီးမွေးငှက်ပျောသီးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်) တစ်ဖီး၊ ဂျုံမှုန့် ၁၅ ကျပ်သား၊ အုန်းသီး တစ်လုံး၊ ထောပတ် ၁၀ ကျပ်သား၊ သကြား ၁၀ ကျပ်သား၊ (အချိုအရသာ ပါဝင်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ထည့်နိုင်ပါတယ် နော်) ဆားအနည်းငယ်၊ မုန့်လုပ်ရာမှာ သုံးတဲ့ အရောင်မှုန့်(ဒီတစ်ခါ ၂ လွှာလုပ်မှာမို့ အနီရောင်နဲ့ အ၀ါရောင် အနည်းငယ်) တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ငှက်ပျောသီးကို အလုံးလိုက် အခွံနွှာပေးထားပါ။ ကျွန်မအခုလုပ်မယ့်နည်းလေးက ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက စားဖူးလာတဲ့ ငှက်ပျောသီး ဆနွင်းမကင်းမျိုးနဲ့မတူတာ မို့ ငှက်ပျောသီးတွေကို ကြေအောင် ခြေစရာမလိုဘဲ အလုံးလိုက်ထည့်ပြီး ဖုတ်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ အုန်းသီးကိုလည်း ခြစ်ပြီးတဲ့အခါ ဦးရေ ညှစ်ယူထားပြီး ကျန်တဲ့အုန်းသီးဖတ် တွေကို ဇလုံတစ်လုံထဲ သီးသန့်ထည့်ပေးထားပါနော်။
ပြီးတဲ့အခါ ဇလုံကြီးကြီးတစ်လုံးကို ယူပြီးတော့ ဂျုံမှုန့်၊ အုန်းသီးဖတ်ရယ်၊ ထောပတ် သုံးပုံတစ်ပုံရယ်၊ ဆား၊ သကြားတို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင် နာနာနယ်ပေးပါနော်။ နယ်တာ သမသွားပြီဆိုရင်တော့ နယ်ထားတဲ့ မုန့်တစ်ဝက်ကို အရောင်မှုန့်အနီနည်းနည်းကို ရေလေးနဲ့ ထည့်ဖျော်ပြီး ရောနယ်ပြီး ကျန်မုန့်တစ်ဝက်ကိုတော့ အရောင်မှုန့် အ၀ါရောင် နည်းနည်းကို ရေထည့်ဖျော်ပြီး ရောနယ်ပေးပါနော်။
ပြီးရင် မုန့်ဖုတ်မယ့် အိုးထဲကို ထောပတ်သုံးပုံတစ်ပုံနဲ့ သုပ်လိမ်းပေးပါနော်။ ပြီးရင် အနီရောင်မုန့်သားကို ပါးပါးလေးထည့်ပြီး ငှက်ပျောသီးတစ်ဝက်ကို အလုံးလိုက်လေးတွေ ညီညီစီပေးပါ။ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလည်း နည်းနည်းလေးစီခြားပေးပေါ့နော်။ ပြီးတဲ့အခါ မုန့်သားအနီရောင်တွေကို ညီအောင်ဖြည့်ပြီး ထပ်ထည့်ပေးပါနော်။ အနီရောင်မုန့်သားပြီးရင် အ၀ါရောင်မုန့်သားနဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေကိုလည်း ခုနကလိုပဲ ထည့်ပေးပါနော်။ မုန့်သားထည့် တဲ့အခါ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေး ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မဟုတ်ရင် မုန့်ပွပြီး လှီးတဲ့ အခါ ကြေကုန်မှာ စိုးလို့ပါနော်။ မုန့်သားထည့်ပြီးရင်တော့ အုန်းနို့ဦးရည်လေးတွေကို မုန့်ဗန်းအနှံ့ညီညီညာညာလေး ဖျန်းပက်ပေးပါနော်။
မုန့်ဖုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မီးများများနဲ့ အောက်မီးနည်းနည်းထားပြီး ဖုတ်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Oven နဲ့ ဖုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မီး ၂၂၀ နဲ့ အောက်မီး ၁၅၀ လောက်ထားပြီး နာရီဝက်လောက် အရင်ဖုတ်ပေးပါနော်။ နာရီဝက်ပြီးရင် မုန့်အိုးကို ခဏ အပြင်ထုတ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ထောပတ်နဲ့မုန့်သားမျက်နှာပြင်ကို သုပ်ပေးပါနော်။ ပြီးတဲ့အခါ မုန့်သားအကျက်ညီအောင် အောက်မီးကို ထပ်လျှော့ ၁၀၀လောက်၊ အပေါ်မီးကိုလည်း ထပ်လျှော့ ၁၈၀ လောက်နဲ့ ထားပြီး နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက်ကြာအောင် ထပ်ဖုတ်ပေးပါ နော်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မုန့်သားမနပ်သေးဘူးလို့ ထင်ရင်တော့ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်လောက် ထပ်ပြီး ထားလို့ရပါတယ်နော်။ မုန့်သားကျက်မကျက်သိချင်ရင်တော့ ဓားဦးချွန်လေးနဲ့ မုန့်ဗန်းထဲ ထိုးထည့်လိုက်၊ မုန့်သားတွေ ဓားမှာ ကပ်ပါမလာဘူးဆိုရင်တော့ အိုကေပြီနော်။ ပြီးရင်တော့ မုန့်သားလုံးဝအေးသွားအောင် စောင့်ပြီးမှ မုန့်လှီးပါနော်။ နောက်မဟုတ် ရင် မုန့်သားတွေ ပဲ့ကြေပြီး အတုံးမပေါ်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ခြေ အနီရောင်၊ အပေါ်လွှာ အ၀ါရောင်လေးနဲ့ ငှက်ပျောသီး ဆနွင်းမကင်းရပါပြီနော်။ ငှက်ပျောသီးလေးတွေက လှီးလိုက်တိုင်း အကွင်းလေးလိုက်လေး တွေနဲ့မို့ စားချင်စဖွယ် အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ ငှက်ပျောသီး နှစ်လွှာဆနွင်းမကင်းလေး ရပါပြီနော်။ ဘိန်းစေ့ /နှမ်းစေ့ ထည့်ချင်ရင်လည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ နောက်ပြီး အုန်းဆီချက်နဲ့လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်နော်။
မှတ်ချက်။ ။ ငှက်ပျောသီးဘာလို့မခြေလဲ ဆိုတော့ ပြည်ပရောက် မောင်နှမတွေအဖို့ ရခိုင်ငှက်ပျောသီးရဖို့ အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးကျတော့ အလုံးလိုက် အတိုင်းဆိုရင် သိပ်မွှေးပြီး သူ့ကို ခြေလိုက်လို့ရှိရင် အခန့်မသင့်ရင် မမွှေးတော့ဘဲ ရော်ဘာနဲ့ ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ မုန့်ပျက်တယ်တော့ မဟုတ်ဘဲ အနံ့က ဆွဲဆောင်မှု မရှိတော့ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ နောက်တစ်ခုက တစ်ချို့က မုန့်ဖုတ်ရင် ကိတ်မုန့်ဖုတ်သလို ရနံ့မွှေးထည့်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်မို့လို့ အဲ့ဒီလို ရနံ့မွှေးကို အသုံးပြုဖို့ အားမပေးလိုပါဘူးနော်။ မြန်မာ့ရိုးရာအတိုင်း အုန်းသီးနဲ့ထောပတ်လေး ကိုပဲ သုံးပြီး ဆနွင်းမကင်းနံ့ အီအီမွှေးမွှေးလေးအတိုင်း ရရှိအောင်မို့ပါနော်။
စန္ဒကူး August 23, 2010 at 2:06 PM
အားတဲ့ရက်မှလုပ်စားမယ်.. အနီအ၀ါက ရောင်တင်မှုန့်နဲ့ နနွင်းလားမမ..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 23, 2010 at 11:36 PM
ဒါနဲ့ လူလည်း ပေါင်၂၀၀ဖြစ်လာတော့မယ် ထင်ပါရဲ့
ဒီအစားအသောက် ဘလော့ဂ်တွေကို ဝေးဝေးရှောင်မှ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.. မဟုတ်ရင် ချက်နည်းလေးကြည့်လိုက် လုပ်စားလိုက်နဲ့..
ပေါင်တွေတက်တက်လာတာ ၀ယဉ်ကျေးမယ် ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ ရတော့မယ်း))
nu-san August 24, 2010 at 10:57 AM
မလုပြောသလို လုပ်ကြည့်ဦးမယ် အဟိ.. လုပ်နေတာတော့ စိတ်ကူးထဲမှာ လုပ်နေတာ.. ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းက အားလုံးကြေအောင်ခြေပြီးမှ လုပ်တော့ အရောင် မလှဘူး အမရယ်.. နောက်တစ်ခါ အမပြောသလို လုပ်ကြည့်မယ်... ပြောင်းဖူးကျောက်ကျောလည်း အခုထိ မစမ်းသပ်ရသေးဘူး.. :P
My oven has only one heat setting (Lower one) Can you please suggest me how can I make it? I wanna try this because I haven't had this dessert for so long.
:P August 28, 2010 at 12:28 PM
ငှက်ပျောသီး ဆနွင်းမကင်းကို သိပ်ကြိုက်တာ... အိအိ
:P August 28, 2010 at 12:30 PM
ဖွဘု မှာ ၇ှဲလိုက်ပြီ... စားချင်ရင် အလွယ်တကူပုံလေးကြည့်ရအောင်လို့
subuueain August 28, 2010 at 8:44 PM
အိမ်သစ်လေးနဲ့ လှမှလှ :)
ဂျာမုန်းဒန် August 29, 2010 at 5:48 AM
သက်တန့်ငယ် December 22, 2010 at 4:18 PM
how much is ၁၅ ကျပ်သား? Halfacup orateaspoon?
လုလု October 10, 2011 at 1:07 PM
၆၂ ကျပ်ခွဲသား = ၁ ကီလိုဂရမ်
၁၅ ကျပ်သားဆိုတော့ ၀.၂၅ ကီလိုဂရမ်လောက်ပေါ့နော်။